I-China Low Latency Mode Mode Touch Control RGB Lights Driver Dual Ukusekela I-True Wireless Earbuds Earphone Ukwakha Nokwakha | Yong Fang
Imodi Yokugembula Yesimo Esiphansi Esithambile I-RGB Lights Driver Yesibili Exhasa I-Earphone Yangempela Engenantambo
Amandla we-Li-battery: 3.7V, 30 mAh
Igama lomkhiqizo: T26
Isikhathi sokushaja zombili izindlebe: isikhathi esingu-5
Driver Umshayeli we-Bass Dual Neodymium 6mm omangalisayo】 Itholakala kalula izingcezu ezimbili ze
Umbala wegolide abashayeli bekhwalithi ephezulu abavela ezindlini ezingafihli ngaphambili zale TWS
izindlebe. Lokhu kwenzelwe isipiliyoni semidlalo sokugcina nokulalela umculo
【Ngemodi yokudlala engenantambo yeLatency LowYenzelwe i-ATS 3015
i-chipset ye-bluetooth engenantambo esezingeni eliphezulu, yakhelwe ngemodi yokudlala futhi
imodi ejwayelekile. Imodi yokudlala yakhelwe ngobungcweti ekudluliseni okusheshayo futhi
izinhloso zokudlala ze-latency ephansi. Futhi, imodi ejwayelekile yenzelwe ukukhuluma ngocingo,
ukulalela umculo, nokunye ukuxhumana nge-inthanethi okungenantambo ngokuxhaswa ngamadivayisi
i-bluetooth. Izindlela ezimbili zingashintshwa komunye nomunye ngokuthinta;
L Izibani ze-RGB On Case Case & Earpieces】I-earpiece yakhelwe ngamalambu e-RGB futhi yakhelwe ilogo eyenziwe ngokwezifiso enamalambu. Kwicala lebhethri, uhlangothi ngalunye olwakhiwe ngamalambu e-RGB futhi lapho uvula ikesi lebhethri noma ushaja ibhethri ngaphakathi kwebhethri, amalambu e-RGB azoshintshwa ngokuzenzakalela. Futhi, ngamalambu e-RGB, angenziwa ngezifiso ngokususelwa kuzidingo zamaphrojekthi ngamunye wokwenza lo mkhiqizo ngokuhlukahluka okuningi;
Design Umklamo Wezindlu We-Ergonomic Wokuqina Okuhlukile】Yize le earphone ye-tws yakhelwe ngezingcezu ezimbili zabashayeli ezinobubanzi bayo, i-6mm, ithimba lethu lobunjiniyela lipholishe kahle ubunjiniyela bezindlu ukuqinisekisa ukuthi isikhathi eside sigqoka ukuqina kanye nama-earbuds ahlezi ngaphakathi kwezindlebe ezizinzile. Okwamanje, lokhu kutholakele ngokuya ngokusebenza kwekhwalithi ephezulu ye-acoustic, nayo.
Battery I-50mAh Ibhethri Yezinto Zokufakwa & 500 mAh Ibhethri Lecala Lebhethri】Ngaphakathi kwendlu, kukhona ibhethri le-50mAh ngaphakathi kwendlu ngayinye, futhi umthamo webhethri ngaphakathi kwecala yi-500mAh. Ngebhethri eligcwele, i-earphone ingasebenza amahora ayisithupha. Futhi, ikesi lebhethri lingashaja ama-earphone izikhathi eziphindwe kathathu. Sekukonke, ngosizo lwamandla avela kuleli cala, le-earphone ingasebenza amahora angama-18 ngaphezulu. Futhi, isokhethi lokushaja ibhethri yi-USB C.
Langaphambilini Ifektri yangempela i-Tws Earphone & Headphone Sports Headset Running Fitness Wireless Earbuds T18
Olandelayo: I-USB C Ukushaja Intengo Entsha Eyenziwe Ngokuncintisana Ngaphezulu kwehedfoni engenantambo ye-Bluetooth
CE Isitifiketi se-TWS Wireless Auriculares Blueto ...
Uhlobo lwamuva lomhlaba jikelele lomshayeli oshukumisayo othinta ...
Isitolo Sokuthengisa Esiku-inthanethi Izandla Zamahhala Ama-Tws Stereo Heads ...